I-Tesla Semi, le yitraki yombane ka-Elon Musk | Iindaba zeGajethi
Ufikile umhla. U-Elon Musk wayenomnyhadala asigcinele wona apho wayeza kubonisa umhlaba umbono wakhe wentengiso yeelori. Wakhwela komnye wabo wafika kwindawo yokuhlangana. Kwakukho iimodeli ezininzi I-Tesla Semi, ilori yombane egcwele ngokupheleleyo eza kuqala kwimveliso ngo-2019.
I-Tesla Semi inembonakalo yexesha elizayo. Ayisiyiyo le kuphela, kodwa iya kuba nokukhawulezisa okukhulu kunye nokuzimela okukhulu. Kubaqalayo, uElon Musk uthelekise iilori zakhe kwiimodeli eziqhelekileyo. Ingakumbi xa kuziwa ekukhawuleziseni. Amanani okuqala banikwa kuphela ndlwana. Iziphumo ze-0-100 km / h? Njengemoto yemidlalo-Ufikelela kwisantya kwimizuzwana emi-5, ngelixa ilori yedizili eqhelekileyo ithatha malunga nemizuzwana eli-15.
Kodwa apha kwakungekho konke. Ukuba i-Tesla Semi ihamba netreyila enobunzima beepawundi ezingama-80.000 (malunga neetoni ezingama-36), ukukhawulezisa ukusuka ku-0-100 km / h kuyakuba yimizuzwana engama-20; imodeli eqhelekileyo isalela ngasemva kakhulu. Ngeli xesha, ukuzimela kunikwa ziimoto ezi-4 ezizimeleyo kwii-asi ezingasemva. Oku kuyakwenza ukuba iSesla Semi ikwazi ukufikelela kumgama weemayile ezingama-500 (Iikhilomitha ezingama-800) ngentlawulo enye.
Kwelinye icala, sithe uyilo alushiye mntu lungashukumi. Ukujonga nje ikhabhathi yomqhubi, siyaqonda ukuba sijamelene nomlinganiso omtsha kwicandelo leelori. UTesla ebefuna ikhabhathi yakho ikufutshane netreyini kuloliwe oqhelekileyo. Ithetha ntoni le nto? Ewe, umqhubi uya kuhlala phantsi embindini wekhabhathi. Phambi kwakhe, ifestile enkulu kunye nolawulo lwepaneli elawulwa zizikrini ezibini ezikhulu zokulawula yonke into. Ngaphezu koko, ukuba ujonge imifanekiso, iTesla Semi ayinazipili; endaweni yoko kukho iikhamera eziza kubonisa yonke into kwizikrini zangaphakathi.
Kanjalo, iya kuba ne-Autopilot yokuzimela ngokuzimela kunye nenkqubo yokuncedisa ecaleni kwendlela Sele ikhona kwizithuthi zakho zangoku. Okokugqibela, uTesla uqikelela ukuba umsebenzisi uya kuba nakho ngaphezulu kwama- $ 200.000 kulondolozo lwamafutha kwisithuba seminyaka emibini. Njengoko sikuxelele, i-Tesla Semi iya kungena kwimveliso kwi-2019, nangona ukubhukisha kokuqala kunokwenziwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-Tesla Semi, yile lori yombane ka-Elon Musk